Ilmihii dalxiiska loo kaxeeyay ee aan dib usoo noqon - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Benoit De Freine
Maxkamad ku taalla dalka Belgium ayaa baaraysa eedaymo la xiriira ganacsi sharci darro ah oo ku saabsan in carruurta u dhashay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si sharci darra ah loogu dhoofiyo dalkaas.
Tuulada Gemena oo boqolaal Mayl u jirta caasimadda DR Congo ee Kinshasa ayaa la sheegay in dadka ku nool deegaankaas ay u badanyihiin beeraleey.
Abdula Libenge, waa 34 sano jir harqaanle ah, waana aabaha mid ka mid ah afar carruur ah oo la sheegay in laga dhoofiyey magaalada Kinshasa, dibna aan usoo noqonin.
Qoysaska ay kasoo jeedaan carruurta la dhoofiyay ayaa loo sheegay in ilmahooda loo kaxeynayo fasax dalxiis ah.
Carruurtan ayaanan weli soo laabanin. Qoysaskan oo aysan u suurtagelin inay taageero ka helaan laamaha dowladda ayaa waxa kaliye ee ay awoodan ay noqotay inay sugaan carruurtooda.
Labo sano ka dib markii gabadha Mr Libenge la waayay, waxa uu helay booqasho lama filaan ah si arrinka uu warbixin uga helo.
Weriyayaal u dhashay Belgium oo lagu kala magacaabo Kurt Wertelaers iyo Benoit de Freine ayaan horay uga warheynin eedeynta ku saabsan in dalkooda ay ka socoto arrin sharci darro ah oo ilmaha ay korsanayaan waalidiin aanan dhalin.
Sida ay laba weriye faddeexadan ku fashileen
Dacwad oogaha ayaa ogaaday in waalidiinta carruurtan ay weli noolyihiin, taasoo ka duwan sida ku xusan warqadaha oo ah inay waalidiintooda dhinteen.
Baaritankii laga billaabay Brussels ayaa waxa uu tagay tuuladii Gemena ee uu Abdula Libenge ku noolaa.
Wuu soo dhaweeyey waxa uuna tusiyay sawirka gabadhiisa.
"Waxaan sawirkan qaaday maalintii ay Kinshasa u baxday," Ayuu ku yiri. Aad ayey u faraxsanayd . Ma heli doono fursad aan kula kulmo. Ma awoodno inaan iibsanno tikit aan ugu tagno. Balse waxay heshay fursadaas."
Banaanka guri kale waxa ay kula kulmeen Suriya Moyumbe oo ilmaynaysa, waxay gacanta ku haysaa sawirka gabadheeda oo markii laga qaadayay sawirkan aan gaarin socod.
"Qoyska seygayga waxay igu eedeeyeen inaan falkan aniga ka dambeeyey oo aan lahaa go'aankii ay gabadhayda ku baxday. Ma ahayn inaan sidaas sameeyo. Balse waxay ila ahayd fursad aad u qiimo badan,"Ayey ku tiri wariyaashii gurigeeda ku booqday.
Wertelaers iyo De Freine waxay dib ugu soo noqdeen Brussels si ay cadaymahooda ugu geeyaan dacwad oogaha ka dib waxay dib ugu noqdeen Gemena si ay u soo qaadaan DNA.
Waxaa natiijada baaritanka lala wadaagay qoysaskii carruurta korsanayay oo u haystay in waalidiinta ilmahaan ay dhinteen.
"Waxaa jira dad aanan samaynin shaqadooda, oo dhaqaale ahaan mashruucan ka faa'iidaystay," Ayey tiri qareenka saddexda qoys u doodaya.
"Qorshahaan waxa uu u egyahay mid ay ka kala shaqeeyeen dad ka soo kala jeeda DR Congo iyo Belgium."
Maxaa ku dhici kara carruurtan?
Maxkamadda aarimaha la xiriira qoysaska ee dalka Belgium ayaa go'aanka ugu dambeeya gaari doonta.
"Waa kiis aad u adag maxaa yeelay go'aanka ugu dambeeeya wuxuu ku xiranyahay rabitaanka ilmaha. Go'aan iskama qaadan karno ilmaha waxa u fiican uu doonayo waa inaan ogaanno." Ayey tiri Cantel.
Mr Beauthier waxa uu leeyahay waalidiinta ilmahaan korsanayay waxay sidoo kale isku diyaarinayaan wax walba oo soo bixi kara.
"Waxaan xaqiiqdii isweydiinnaa, maxaa cunugga u wanaagsan? jawaabna ma helno. Balse jawaab dhan ma lahan." Ayey tiri mid ka mid ah waalidiintii ilmaha ku korsanayay Belgium.
Abdula Libenge waxa uu leeyahay rajo ah in gabadhiisa ay kusoo laaban doonto guriga.
"Waxaan ogahay in dadka ay dhihi doonan ilmaha waxaa u wanaagsan Belgium, laga yaabee inay iyada nolosheeda u fiicantahay balse waxaan weli leeyahay rajo ah inaan gabadhayda dib ula kulmi doono."